देशभर प्रहरीको यस्तो कन्तबिजिग !
काठमाडौं – मुगुको चैनागाउँ प्रहरी चौकी मन्दिर परिसरभित्र छ। भवन नभएपछि मन्दिरभित्रको टहरोमा प्रहरीले दिन काटिरहेका छन्। शंकास्पद व्यक्ति समातिँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुर्‍याउनुपर्ने बाध्यता छ।
सल्यानको लुमाहस्थित इलाका प्रहरी कार्यालय शिवालय मन्दिरको जग्गामा छ। जग्गा नपाएपछि प्रहरीले मन्दिरको जग्गामा कार्यालय राखेको हो। आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ । झापा किचकबधस्थित प्रहरी चौकीको हालत पनि उस्तै छ। किचकबध संरक्षण समिति भवनमा प्रहरी कार्यालय छ। स्थानीयले प्रहरीलाई समिति भवन दिएका हुन्। पाँचथरको च्याङथापु सीमा प्रहरी चौकी भाडाको घरमा छ। पाँचथरका अधिकांश प्रहरी भवन भाडामै छन्।
मुगु, हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, मनाङलगायत जिल्लामा त जाडोयाममा दाउरा किन्ने पैसासमेत नहुँदा प्रहरीले स्थानीयसँग मागेर जोहो गर्दै आएका छन्। प्रहरी मुख्यालयका अनुसार एक हजार दुई सय ४४ वटा इकाइमा खाना पकाउने मेस नहुँदा छाप्रोबाटै गुजारा चलाउँदै आएका छन्। अचम्म त प्रहरीका एक हजार एक सय ३९ वटा भवनमा शौचालय नै छैनन्। उनीहरू खाली जग्गामा पालले बेरेर शौच गर्न बाध्य छन्।
मुख्यालयका अनुसार एक सय ३० वटा इकाइ पुराना सार्वजनिक भवन र सरकारी कार्यालय बस्दै आएका छन्। अझै ६ सय १२ अस्थायी पोस्ट सञ्चालित छन्। राजधानीमै प्रहरीको बिजोग छ। महानगरीय प्रहरी कार्यालय टेकु पालमै छ। अपराध महाशाखाको कार्यालय त पार्टी प्यालेसभित्र छ। दरबारमार्ग वृत्त आधुनिक भवनमा सरे पनि बाँकी अधिकांश जीर्ण भवनमै छन्।
महानगरीय प्रहरी कार्यालय मातहतकै एक सय २९ वटा प्रहरी इकाइको जग्गा छैन। सयवटा भवन भाडामै छन्। ९७ वटा इकाइमा ब्यारेक छैनन्, ९९ वटा इकाइको आफ्नै शौचालय छैन। तराईका प्रहरी इकाइको अवस्था पनि उस्तै छ। जनकपुर, सिरहा, सप्तरी, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही र महोत्तरीका देहाद (गाउँ) का चौकीको अवस्था नाजुक छ। फुसले छाएको छाप्रोमा इकाइ राखिँदा गर्मी, वर्षा र जाडोमा कष्टपूर्ण जीवन जिउन प्रहरी बाध्य भएको डीआईजी नेउपाने बताउँछन्। aवर्षामा डुबानमा परेका स्थानीयको उद्धार गर्न हिँडेपछि फर्केर आउँदा आफ्नै चौकी बगाएको घटना पनि छन्। गर्मीमा लामखुट्टेको टोकाइको पीडा त छँदै छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण शर्मा दुवाडी प्रहरी कार्यालयको अवस्थाबारे जानकार भए पनि स्रोत-साधन पर्याप्त नहुँदा स्तरोन्नति र निर्माण गर्न नसकिएको बताउँछन्। ‘सीमित स्रोत-साधनलाई व्यापक परिचालन गर्ने अवस्था छ। प्रहरीलाई सुविधा सम्पन्न कार्यालयमा बस्न दिने र स्रोत-साधनसम्पन्न गराउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता पनि छ। प्रहरीसँग विस्तृत विवरण मागेर कसरी अपग्रेड गर्न सकिन्छ, अध्ययन गर्छौं।’
प्रकाशित : सोमबार, माघ २९, २०७४११:२३
काठमाडौँको होटलमा राखी एक हप्ता सम्म मस्ती गरेर प्रेमी भागेपछि…
प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारकाे अन्तिम तयारी
राजधानीका यी २३ डेरीका दूधमा दिसामा पाइने हानिकारक जीवाणु कोलिफर्म(डेरीका नामसहित), खानै नहुने अवस्थामा पुग्याे दूध
गाली गरेको निहुँमा बालकको ढुंगैढुंगाले हानेर विभत्स हत्या
सरकारको अपिल- ‘बच्चा जन्माउन, ढिलो नगर्नुहोस्’
किन लाग्यो प्रहरीमा जागिर छाड्नेको लर्को ? यस्तो छ रहस्य